NIC Asia Bank Limited(NIC Asia Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दुई लघुवित्तसहित तीन कम्पनीका ७.६६ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले ३ कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वको ७.६६ लाख कित्ता बढी संस्थापक सेयर आज (असोज ६ गते) बाट लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का कुल ७ लाख ६६ हजार ७९६ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा...
एनआईसी एसियाले राख्यो ३ कम्पनीका झन्डै ७.५ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले ३ कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वको झन्डै ७.५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज (भदौ ४ गते) बाट लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लगानी कोषका कुल ७ लाख ४२ हजार ७७३ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा आरएमडीसीको...
मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको काम ९ वर्षमा ६५%मात्र सम्पन्न, कहिलेसम्म सकिएला ?
काठमाण्डौ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ९ वर्षमा ६५ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ। चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको अगुवाइमा सन् २०१३ मा सुरु गरी २०१६ मा सम्पन्न गरिनुपर्नेमा अझै १ वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए। ६ वर्षअघिको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी,...
एनआइसी एशियाको व्यवसायमा ऐतिहासिक वृद्धि, अधिकांश वित्तीय र गैरवित्तीय सूचकमा छलाङ
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले गत आ.व. २०७७/७८ मा व्यवसायमा ऐतिहासिक वृद्धि गरी अधिकांश वित्तीय तथा गैरवित्तीय सूचकाङ्कहरूमा अग्रणी स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । बैंकले आ.व. २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको अधिकांश वित्तीय तथा गैरवित्तीय सूचकांकहरूमा अग्रणी स्थान ओगटेको छ भने बैंकका समग्र...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले ३ कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वको झन्डै ७.५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज (साउन १९ गते) बाट लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लगानी कोषका कुल ७ लाख ४९ हजार ९७३ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा...
यी ३ कम्पनीका पौने ८ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले तीन कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वको पौने ८ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज (साउन ३ गते) बाट लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लगानी कोषका कुल ७ लाख ७५ हजार ४७३ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो।...
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले ल्याएको न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता योजनाअन्तर्गत घातक रोगको उपचारबापत रु. १० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ। बैंकको झापा जिल्लास्थित दमक शाखामा न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता ‘गोल्ड श्रेणी’ को खाता खोलेका दमक–५, झापाका ४४ वर्षीय गजेन्द्र विक्रम कटुवाललाई घातक रोगको उपचारवापत उक्त रकम भुक्तानी...
तीन लघुवित्तका पौने ५ लाख बढी कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । तीन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पौने ५ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज (असार २७ गते) बाट लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको आरएमडीसी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स र महुली लघुवित्तका कुल ४ लाख ८३ हजार ६७३ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा आरएमडीसीको ३ लाख ७३ हजार...
एनआईसी एसिया बैंकले राख्यो ३ कम्पनीका सवा ४ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंकले विभिन्न ३ कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज असार १५ गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले नागरिक लगानी कोष, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स र महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सवा ४ लाख ३१ हजार ४३५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा नागरिक लगानी कोषको ३ लाख...
काठमाण्डौ । आफ्ना विभिन्न प्रडक्टहरुमा ‘चमात्कार’ शब्दलाई जोड्ने गरेको एनआइसी एशिया बैंकले निक्षेप संकलनमा चमात्कार नै गरेको छ । एनआइसी एशिया बैंक ३ खर्ब निक्षेप कटाउने देशकै पहिलो बैंक बनेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार एनआइसी एशियाले बैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको हो । गत एक महिनामा बैंकले ८...
अत्यावश्यक बैंकिङ सेवाका लागि एनआईसी एशिया बैंकको ‘एकीकृत हेल्प डेक्स’ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । मुलुकभर फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट सिर्जित असहज अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनबाट देशका विभिन्न स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा यस बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरूलाई सहज रुपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ‘एकीकृत हेल्प डेक्स’ को सेवा सञ्चालन गरेको छ । यस असहज परिस्थितीमा ग्राहकलाई...
रिङबाट बाहिरिँदै एनआइसी एशिया, नाफामा अरुले टप्न थाले
काठमाण्डौ । बजारको नयाँ प्लेयरको रुपमा उदाएको एनआइसी एशिया बैंक एकपछि अर्को गर्दै खेलबाट बाहिरिन थालेको छ । अघिल्लो वर्ष र यसअघिका त्रैमाससम्म पनि खूद नाफा आर्जन गर्ने बैंकहरुमा टप थ्रीमा आइरहेको यो बैंक अत्यधिक खर्च धान्ने सकसमा पर्दा रिंगबाट क्रमशः बाहिरिन थालेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो...
नवीलको तुलनामा एनआइसीको लाभांश क्षमता अत्यन्त कमजोर, अन्य सूचकमा कसले कसलाई टप्यो ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौ । बैंकिङ उद्योगका दुई जाइन्ट प्लेयर नवील बैंक लिमीटेड र एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । दोश्रो बजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य भएको नवील बैंक र त्यसपछि दोश्रो बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको एनआइसी एशिया बैंकको वित्तीय विवरणमा धेरै लगानीकर्ताको...
एनआईसी एसिया बैंकले राख्यो २ कम्पनीमा रहेको आफ्नो संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । दुई कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स र नागरिक लगानी कोषमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल ९७ हजार ७०६ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४७ हजार ७०६ कित्ता र नागरिक लगानी कोषको ५० हजार...
एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ न्यौपानेलाई ‘प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ)’ विभूषण प्रदान
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई ‘प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ)’ विभूषण प्रदान गरेकी छन्। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णयबाट सिफारिस भएअनुसार २०७६ असोज ३ गते संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) का अवसरमा राष्ट्रपतिबाट...